Teknolojiyada & Waxsoosaarka - AngelBiss Healthcare Inc.
Magaca qaabka utility: Neefsashada shoogga iyo aaladda yareynta buuqa ee uruuriyaha oksijiinta
Magaca qaabka utility: qayb loogu talagalay dhalada huurinta
Magaca qaabka utility: aamusiyaha u ah isku-uruuriyaha oksijiinta
Lambarka shatiga: ZL201821853928.4 Taariikhda ku dhawaaqista rukhsadda: July 26, 2019
Magaca design: qalabka nuugista korontada
Lambarka shatiga: ZL201730552466.7 Taariikhda ku dhawaaqista rukhsadda: Juun 29, 2018
Magaca qaabka utility: Nidaamka xayeysiinta isku dhafan ee iskudhafka oksijiinta
Lambarka shatiga: ZL201320711652.7 Taariikhda ku dhawaaqista rukhsadda: Juun 18, 2014
Magaca qaabka utility: qaab-dhismeedka daboolka hoose ee nidaamka xayeysiinta
Lambarka shatiga: ZL201320515904.9 Taariikhda ku dhawaaqista rukhsadda: Febraayo 26, 2014
Magaca qaabka utility: Qaab dhismeedka daboolka dhammaadka isku dhafan ee munaaradda xayeysiinta
Lambarka shatiga: ZL201320548682.0 Taariikhda ku dhawaaqista rukhsadda: Febraayo 12, 2014
Codsiyada patent-ka ee guuleystey waxay sidoo kale nagu dhiirrigelinayaan in aan siino alaab tayo sare leh una keenno caafimaad iyo farxad macaamiil badan.
AngelBiss wuxuu leeyahay khadad kaladuwan oo kaladuwan oo loogu talagalay alaabada noocyada kala duwan leh nidaamka hawlgalka caadiga ah. Kahor soo saarida, shay kasta si adag ayaa loo kormeeraa loona xushay IQC. Iyo inta lagu jiro isku imaatinka, geeddi-socod kasta oo shirkii si adag ayaa loo kormeeraa, iyo tayada wax soo saarka ayaa sidoo kale si adag loo tijaabiyaa waaxda kormeerka tayada. Hawl wadeenadu waxay si adag ugu shaqeeyaan si waafaqsan Nidaamka Hawlgalka Heerka. Dhamaan nidaamka wax soo saarka wuxuu u hogaansamayaa dukumiintiyada caalamiga ah ee ISO.